Codsigaaga ha loo qoro si xirfadaysan iyo shaqsiyaad ah xaashiyayaal xaashi ah
Xirfadle vid Shaqsi ✓ Dammaanad Qancitaan ✓
Caawinaad ka hel adiga codsiga
Shaqo ma raadineysaa oo xitaa miyaad heshay shaqadii aad ku taameysay?
Weyn, waxa hadda maqan ayaa mid ah codsi muhiim ah!
Laakiin maxaa dhab ahaan waa in halkan lagu ilaaliyaa, ma jiraan guud ahaan xeerar la dabakhi karo iyo sidee ugu fiican ee aan ku dhaqan gelin karaa?
Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno inaad ka tagto aragti waara.
Taageero ka hel adeegga dalabka iyo ...
give sii naftaada fursad faa'iido leh oo tartan leh dukumiintiyo tayo sare leh
... waxaa lagugu martiqaadi doonaa wareysiyo badan oo shaqo ah
... waxay ka faa'iideysaneysaa inaad la yeelato qof xiriir shaqsi ah oo aad hesho foomamka dib loo isticmaali karo
... waxaad kuheli doontaa dammaanad qaad qancin dalabkaaga
Dhamaanteen waan ognahay: Qor codsiyada waxay noqon kartaa mid caajis ah iyo, wixii ka sarreeya, shaqo dhib badan.
Kaliya maahan inaad qorto qiimeynta naftaada, laakiin isla waqtigaas waa inaad isticmaashaa hingaad qancin ah, maya, waxa oo dhan waa inay sidoo kale matalaan shakhsiyadaada iyo u qalmidaada booska xayeysiinta jumlado kooban. Madaxa qabow maahan marwalba mid sahlan.
Sidaa darteed waa in ka badan inta la fahmi karo in dad badani ay xiiseynayaan Qoritaanka codsiyada gerne si aad u hesho caawimaad. Ha ahaato xubnaha qoyska ama asxaabta akhriya muunada dalabka ama iskudayada badan ee fikradaha erey bixin loogu sameeyo:
Codsiga booskaaga riyada waa inuu ahaadaa mid muuqda!
Markaa haddii aadan rabin inaad ku tiirsanaato sixitaanno badan iyo talooyin ku saabsan hagaajinta, waxaad caawimaad ka heli kartaa mid Adeegga dalabka si loo soo kaxeeyo.
Ha uga tagin fursadahaaga helitaanka shaqada aad rabto inaad fursad u hesho oo naftaada ha lagu kaxeeyo wakiillada dalabka xirfadeed taageero.
Yaa dhab ahaan qora arjiyada iyo shahaadooyinkee la keenayaa?
Gaaban oo macaan: Xirfadlayaasha arjiga iyo madax-ugaarsadeyaasha, kaliya xirfadleyaal roogayaal ah leh khibrad sannado ah!
Macna ma laha aag xirfadeed oo ay tahay: Laga soo bilaabo tababarka, oo ku saabsan classic Shaqada xafiiska shaqsiga Soosaaraha softiweerka oder Arzt, adeeggayaga si wanaagsan ayaa lagugu soo dhaweyn doonaa meel kasta!
Awooda shaqaalaheena oo ah inay naftooda gashadaan noocyada kala duwan ee warshadaha iyo xaaladaha, waxaad heli doontaa mid qoran oo ku habboon shaqada codsiga fiicnayn prefabricated.
Iyada oo loo marayo cilmi baaris qoto dheer iyo weydiinta dhammaan dukumiintiyada muhiimka ah ee qeybtaada ah, waxaad heli doontaa codsi u gaar ah muddo gaaban, kaas oo si gaar ah loogu soo saaray macaamiil kasta.
Sidee codsi codsi u shaqeeyaa?
1. Xullo adeeg
Halkan waxaad kala dooran kartaa inta udhaxeysa sixitaanka iyo qalabka wax lagu qoro, sida résumé, warqad dabool ama faylalka tacliinta iyo habsami u socodka heerka 5 ama ka shaqeynta degdega ah 2 maalmood oo shaqo ah
2. Gudbi macluumaad
Halkan waxaan uga baahanahay macluumaad sida xayeysiinta shaqada, codsiyada mala awaalka ah, iwm.
3. U dir dukumiinti iyo faallooyin
Ka dib markaad dalbato, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad isticmaasho 5 upload si aad noogu soo dirto macluumaad muhiim ah oo ku saabsan naftaada, CV-gaaga iyo sawirradaada.
Waxaan sidoo kale ku weydiin doonnaa cinwaankaaga biilasha halkan.
4. Buuxi amarkaaga
Halkan waxay ku socotaa bixinta qaan-sheegashada (oo aad dhab ahaan u gudbin karto canshuurta)
5. Qoondeynta processor-ka
Hadda waxaad ka maqli doontaa mid ka mid ah shaqaalaheena oo ku weydiin doona xoogaa su'aalo ah oo ku saabsan dalabkaaga. Marka kubbadda ayaa nala socota!
Waxaan codsaneynaa in yar oo sabir ah halkan, maxaa yeelay wixii hada ka dambeeya waxaan ku shaqeyn doonnaa dalabkaaga shaqsiyeed.
7. Tada arjiga waa kan!
Tallaabada ugu dambeysa, waxaan kaa codsaneynaa inaad dib u eegto dalabkaaga, maxaa yeelay waa inaad hubaal ku qanacdaa shaqadeena. Haddii ay jiraan codsiyo isbeddel, kuwan dabcan lacag la'aan ayaa lagu sameyn doonaa.
Maxay ku kacaysaa in la qoro arji?
Sida aagagga oo dhan, qiimayaashu way ku kala duwan yihiin kuwa bixiya adeegyo badan. Waraaqaha daboolka ah, celcelis ahaan 50 - 140 € ayaa loo baahan yahay, iyadoo kuxiran heerka warshadaha iyo soo galida, dabcan, qiimayaashu mar kale ayey halkaan ku kacayaan. Halkan waxay si fiican uga dhici kartaa inay tahay inaad ku bixiso dhowr boqol oo yuuro faylalka faylalka.
Wada-hawlgalayaashayada ka 360-Grad-Bewerbung.de Si kastaba ha noqotee, waxay u dhaqmeen sidii barkad ka soo horjeedda bixiyeyaasha qaaliga ah waxayna bixiyaan waraaqo jaban oo qiimo macquul ah!
Waxaad haysataa ikhtiyaar Adeegyada loo doonayo shaqsi ahaan xulo, ama isticmaal baakado:
Hesho waraaqaha daboolka mihnadeed!
Caqli iyo soon
Faylal codsi ah oo casri ah
Xal shaqsiyeed baahi kasta
mawduucyada oo dhan
Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka adeegga dalabku?
Waqti badbaadi iyo neerfaha
Ka faa'iideyso sanado badan oo khibrad ah xirfadlayaal
Hel fursadaha ugu badan ee shaqadaada cusub
Hel joogto ah, xirfad iyo
dukumiintiyada dalabka shaqsiga
Waxaad heli doontaa tusaalooyinka dalabyada ee codsiyada dheeraadka ah
Waa inaad lacag ka bixisaa arjigaaga
Xoogaa luminta qaababka qoraalka shaqsiyeed
EQofna damaanad kama qaadi karo adiga guusha
Kala duwanaanshaha tayada ee udhaxeeya waxqabadka dhabta ah iyo waxqabadka la xayaysiiyey
Marnaba qalad ma aha inaad raadsato caawimaad xirfad leh. Dhamaadka, waxaad ku qancin doontaa waxqabadkaaga
Wareysiga iyo shaqada.
a codsi hufan Si kastaba ha noqotee, waxay ku siinaysaa fursad aad ku soo bandhigto naftaada si qumman waxayna kugu ridi doontaa iftiinka saxda ah iyadoo la adeegsanayo habab fudud si aad sidoo kale fursad ugu hesho inaad naftaada u horumariso si buuxda kadib.
Aynu ku caawinno oo aan sugno fursadaha cusub, labadaba xirfad ahaan iyo gaar ahaanba!
"Waad ku mahadsantahay kaalmadaada! Codsigeygu sifiican ayuu u dhacay."